ဇော်ငြိမ်းအေး ( ဆေး - ၂ ): June 2016
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ Knowledge ဆိုတာကို ဗဟုသုတလို့ မှတ်ခဲ့ကြတာပေါ့။ ခုခေတ်မှာတော့ ပညာလို့ ပြောင်းလဲသုံးနှုံးနေကြပါတယ်။
Knowledge နဲ့ ပတ်သက်ရင် ဖတ်ဖူးတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုကတော့
ဒီနှစ်ခုက အပြန်အလှန် ဆက်စပ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံမပါတဲ့ အသိဟာ မပြည့်စုံသလို၊ အသိတစ်ခုမယူနိုင်လိုက်ဘူးဆိုလည်း အဲဒီအတွေ့အကြုံဟာ အလဟဿပါပဲ။
Posted by Zaw Nyein Aye at Friday, June 17, 2016
မြန်မာစာ(ဗမာစာ) နဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ
မနေ့တစ်နေ့ကမှ Tablet အသစ်လေးတစ်ခု စာဖတ်မယ် ရည်ရွယ်ပြီး ဝယ်လိုက်တယ်။ Google နဲ့ Android ပရိသတ်ဆိုတော့ တစ်ကယ်တမ်း Chrome Pixel C မဟုတ်တောင် Nexus9ဖြစ်ဖြစ်သုံးချင်တာ။ နောက်ဆုံးထုတ် android OS နဲ့ အစောဆုံး update တွေ လည်း ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေရ Samsung Galaxy Tablet E 9.6 inches ပဲ ဝယ်ဖြစ်သွားတယ်။
ဝယ်ပြီးမှ ကြည့်တော့ သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်က မက်လောက်စရာ တစ်ကွက်မှ မရှိ။
-- Android version က 4.4.4 တဲ့ (6.* Marshmallow မက7"N" preview တောင် ထွက်နေတဲ့ အချိန်မှာ)
-- Storage Memory က 8 GB (external microSD slot တော့ ပါပါရဲ့)
-- RAM က 1.5 GHz
-- Display ကလည်း TFT; 157 ppi
လျော့ဈေးလည်းမဟုတ် ပုံမှန်ဈေးနဲ့ ဒေါ်လာ နှစ်ရာကျော် သုံးရာနီးပါး ပေးပြီးမှဆိုတော့ နောင်တရသလို ဖြစ်သွားတယ်။
အဓိက ပြောချင်တာက အဲဒါမဟုတ်ပါဘူး။ specs တွေကြည့်ပြီး စိတ်ညစ်နေချိန်မှာ ဝမ်းသာစရာလေးတစ်ခုကြုံရတာကို ပြောချင်လို့ပါ။
အဲဒါကတော့ . .
ဘာ setting မှ မပြင်၊ ဘာ app မှ မသွင်းဘဲနဲ့ ပထမဆုံး စဖွင့်သုံးတဲ့အချိန်မှာကို ဗမာစာတွေ (တိတိကျကျပြောရရင် မြန်မာယူနီကုဒ်နဲ့ ရေးထားတဲ့စာတွေ အကုန်(အမှန်အတိုင်း)) မြင်ရတယ်။ ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ရေးထားတာတွေတော့ မပါဘူးပေါ့လေ။
MUA (ဗေ)၊ M3 စတဲ့ မြန်မာ ယူနီကုဒ် ကီးဘုတ် တွေသုံးရင် ဗမာစာပါ ရိုက်လို့ရတယ်ဗျာ။
Settings>>Language and Input List ထဲမှာ မြန်မာစာ (ဗမာ) မတွေ့ဘူး။
Display >> Font Style ထဲမှာလည်း မြန်မာစာ (ဗမာ) မရှိဘူး။
နောက်မှပဲ iFont Donate app နဲ့ဖြစ်ဖြစ်စမ်းပြီး အခြား မြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်အလှတွေ ရလား စမ်းကြည့်ဦးမယ်။
ဒီလို အရသာကို ဇော်ဂျီဖောင့်ပဲ သုံးတတ်တဲ့လူဆို ဘယ်လိုမှ မသိနိုင်ဘူး။
နိုင်ငံခြားက ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုသုံးမယ့် မြန်မာ(ဗမာ) တစ်ယောက်ကို အဲဒီ ပစ္စည်းကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ရဘဲ ကိုယ့်မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ ရေးလို့ ရိုက်လို့၊ ဖတ်လို့မရချင်ဘူးလားလို့ မေးရင် ရချင်တဲ့ လူချည်းပဲလို့ထင်ပါတယ်။
အရင်တုန်းက နောက်ဆုံးပေါ် ဖုန်းဝယ်တာ ဗမာစာ တန်းမမြင်ရလို့၊ ဂြိုဟ်သားစာတွေလို ဖြစ်နေလို့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ စမ်းပြီး ထည့်ရတာ အမှတ်ရမိတယ်။
root လုပ်ချင်လုပ်၊ မလုပ်လည်း third party app တွေ ထည့်၊ ဖောင့်တွေ download လုပ်ထည့်ပေါ့လေ။
ခုလည်း သုံးတဲ့ ဖုန်း၊ တက်ဘလက် အမျိုးအစားအလိုက် အဲလို လုပ်တဲ့လူတွေ ရှိတုန်းပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီစာဖတ်တဲ့လူထဲမှာများရှိရင် အောက်မှာ မှတ်ချက်လေး ပေးသွားပါလား။ အကယ်၍ မြန်မာယူနီကုဒ်စနစ်ကို အပြည့်အဝပြောင်းသုံးဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်မိပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိရင် တတ်နိုင်သလောက် အွန်လိုင်းပေါ်က ကူညီပါ့မယ်။
Posted by Zaw Nyein Aye at Wednesday, June 08, 2016
Labels: Language (ဘာသာစကား), Notes (မှတ်စု)
ရေးသူ - (ယက္ခ)ရဲကြီး
. . . အသက်လေး ၃ဝကျော်လာပြီးတဲ့အခါမယ် ကျွန်တော့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်အဖြစ်စေဆုံး စကားလုံးက "ပေး"ဆိုတာပဲ။
. . . ဘာသာစကားကို ကျွမ်းဝင်လေ့လာခဲ့ခြင်းက တချို့အချိန်တွေမှာ သူလိုငါလိုလူတွေထက် စိတ်ထိရှမှုပိုများစေသလားမဆိုနိုင်ဘူး။ "ဟေ့ရောင် သားကြီး" လို့ အခေါ်ခံရရင်လည်း နားထဲမှာထောင့်ခနဲဖြစ်ဖြစ်သွားရ။ "ဒစ်လည်နေတယ်ဟ" လို့ ကြားရင်လည်း မျက်နှာမှာ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်ရ။ "တိုင်ပတ်နေတယ်" ဆိုတာရော မူလရင်းမြစ်ကဘာလဲသိကြရဲ့လားမသိ။ ညကလပ်တွေဆီက အဖော်အချွတ်နဲ့ တိုင်လုံးပတ်ပြီးက(ကတယ်ဆို)တဲ့ဆီက ဆင်းသက်လာပုံပါ။ "လန်ထွက်" ဆိုတာ .. ပိုဆိုးသွားပြီ။ ချရေးပြီးရှင်းပြလို့ မကောင်းတော့ဘူး။ မ အင်္ဂါကို ပြောတာလို့သာ သိထားလိုက်ပါတော့။ "မှတ်တောင်ထားရဦးမယ်" က ပြည့်တန်ဆာရပ်ဝန်းက စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ညမယ်တွေဆိုတာ လူတစ်ယောက်ကို မှတ်မထားနိုင်ကြဘူးလေ ၊ သူတို့ကို 'မှတ်ထားနော်'လို့ပြောရင် "အင်း မှတ်တောင်ထားရဦးမယ်ဆိုပဲ" ဆိုတာမျိုး တုံ့ပြန်တတ်ကြတာကိုး။